Matanho mashanu eChako Branding Yekushanda saEconomist | Kuumbwa uye kudzidza
Matipi mashanu ekushambadzira ega ekushanda senge economist
Kuvaka rakasimba rako pachako chiratidzo chinangwa chakanaka mune chero nyanzvi munda. Chinangwa icho, saka, chinokurudzirawo vezvehupfumi vanoda kutsvaga basa kana kutsvaga mikana mitsva pabasa ravo. Rakajeka rakadzidziswa resume rinoratidza iro gadziriro yenyanzvi.
Asi chaicho chiratidzo chinopfuura madigiridzi edzidzo akawanikwa kusvika parizvino. Maitiro ekuratidza yako yakanaka vhezheni yekuvandudza rako basa se economist? MuKurovedza neZvidzidzo tinokupa matipi mashanu echako maricho ekushanda sa economist.
1 1. Kushingairira kutora chikamu mumasocial network
2 2. Kugadzirwa kweblog blog
3 3. Kutaurirana kwehunhu
4 4. Makadhi ebhizinesi ane mufananidzo wazvino
5 5. Kupa mazano kune vezvehupfumi
1. Kushingairira kutora chikamu mumasocial network
Masocial network anopa hunyanzvi hwekutaurirana zviwanikwa kuburikidza nazvo nyanzvi yezvehupfumi inogona kugovana ruzivo rwayo nevamwe. Hupfumi hwakaoma kune vamwe vanhu. Kuendesa misoro yekufarira kwakajairika mumutauro wakapusa ndiko kiyi kusvika kuruzhinji. Kushingairira kutora chikamu mumasocial network, kuburikidza nekuburitswa kwezvakakosha zvemukati, chinhu chakakosha kukurudzira kuvimba. Iko kuvimba kunosimbisa iyo yega brand.
2. Kugadzirwa kweblog blog
Kunyora blog chirongwa chehunyanzvi chinokurudzira vanyori vazhinji. Iyo economics blog inzvimbo inogona kuve nzvimbo yemusangano yevateereri vanofarira kudzidza dzidziso uye mazano nezvenyaya iyi. Usati wasarudza zita renzvimbo kana chimiro chakashandiswa, zvakakosha kuti nyanzvi itarise padanho rekurudziro yavo yekuita basa iri.
Ramba uchifunga kuti sekungovandudzwa kweblogi ine zvinonakidza zvemukati inosimbisa iyo brand mufananidzo weiye economist, yechinyakare nzvimbo haina kuita yakanaka maonero. Iwe unogona zvakare kupindura nenzira inokodzera nzira kune zvirevo izvo vaverengi Vanosiya pane dzimwe nzira.
3. Kutaurirana kwehunhu
Anogona sei economist kusiyanisa kubva kune vamwe nyanzvi vanoshanda muchikamu chimwe chete? Kune zvakawanda zvigadzirwa zvinokanganisa basa rako. Maitiro ako chikamu chetsamba yako yekuvhavha. Nheyo idzo, kune rumwe rutivi, dzinoratidzwawo kuburikidza zviito uye maitiro anosiya tsoka yakanaka pane iyo kambani. Mutsa, muchidimbu, unosimbisa iyo yega chiratidzo nekuti inomutsa kuyemurwa.
Hunhu hwacho hauratidzwe chete mukushandira vatengi, asi zvakare muchisungo nevamwe vaunoshanda navo.
4. Makadhi ebhizinesi ane mufananidzo wazvino
Kune zvishandiso zvakasiyana zvekutsvaga basa nekusimbisa network. Kadhi rebhizinesi chigadzirwa chakakosha. Iyo ine yakakosha fomati yekugovana nyanzvi data mumusangano, kosi, chiitiko kana mune chero nzvimbo yebasa.
Kadhi rebhizinesi haringori chete neakakosha data eeconomist ayo anoratidzwa nenzira iyi. Izvo zvinewo fomati iyo yakakosha kuti nyanzvi izive. Sarudza dhizaini iwe yaunonzwa kugadzikana nayo.
Masocial network, sezvatakamboratidza, zvishandiso zvekutaurirana zvemadhijitari zvinovhura magonhi. Asi zvakakosha kuti iwe ushandise mubatanidzwa wezvinhu zvepamhepo uye zvepamhepo kuti uwedzere kuoneka kwako sehunyanzvi.
5. Kupa mazano kune vezvehupfumi
Maitiro ekudzidzisa anogona kukurudzira zvikuru mune chero hunyanzvi munda. Uye zvakare yakanaka kwazvo mumunda wehupfumi. Wechidiki economist anogona kuwana zvidzidzo zvikuru uye zvidzidzo kubva kakawanda kusangana neane ruzivo ruzivo. Icho chisungo pakati peiye chipangamazano uye iye mupi hachina kungosimbiswa nekuvimba, asi zvakare zvinoenderana nekuyemura. Iye chipangamazano anoperekedza uye anovandudza pfungwa yemudzidzi kubva mumaonero ake sehunyanzvi ane basa rakareba.
Matipi mashanu ekushambadzira ega kushanda se economist ayo, nekudaro, anobatana nechinangwa chekusimudzira kuvimba nevatengi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Studies » Jobho Kubuda » Matipi mashanu ekushambadzira ega ekushanda senge economist
Chii chinonzi orthodontist?